Electroacupcture သည်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဒေသများရှိ FosB / osFosB အဆင့်များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အရက်အလွန်အကျွံစားသုံးမှုကိုလျော့ချပေးသည် (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်။
comments: လေ့လာမှု, အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး deltafosb တစ်သိသာစုဆောင်းခြင်းသွေးဆောင်တွေ့ရှိခဲ့အထူးသ deltafosb အတွက်ကျဆင်းမှုများက paralleled ခဲ့သော electroacupuncture ကိုအလွန်ဘယျလိုမှမအရက်သောက်, လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ စွဲခုနှစ်တွင် DeltaFosB, မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏လုပ်ကွက်သော့ချက်သက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ခြင်း။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရား electroacupuncture အရှင် deltfosb ၏စုဆောင်းခြင်းတားစီး, dopamine ဖိနှိပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(7): e40347 ။ EPub 2012 ဇူလိုင်9။
li က J ကို, နေရောင် Y ကို, သငျတို့သ JH.
နယူးဂျာစီပြည်နယ်, နယူးဂျာစီဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, Newark, နယူးဂျာစီပြည်နယ်, အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏မေ့ဆေးဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဌာန, ဆေးပညာတက္ကသိုလ်နှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ။
နယူးကုထုံးများအတွက်လိုအပ်နေပါသည် အရက် အလွဲသုံးစားမှု, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမေရိကန်နှင့်တစ်ဦးကိုအဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာ။ ကုသဘို့ကိုသာသုံး FDA က-approved မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ် အရက် အလွဲသုံးစားမှု (naltrexone, acamprosate နှင့် disulfuram) ။ ပျှမ်းမျှတွင်ဒီဆေးတွေရေရှည်လျှော့ချသာအလယ်အလတ်အောင်မြင်မှုလိုက်လျော အရက် စားသုံးမှု. Electroacupuncture အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအမျိုးမျိုးမူးယစ်ဆေးဝါးများသက်သာစေနိုင်ကြောင်းပြထားပြီး အရက်။ ယခင်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြခဲ့ကြပေမယ့် electroacupuncture လျှော့ချ အရက် စားသုံးမှုယင်းအခြေခံယန္တရားအပြည့်အဝ elucidated ကြပြီမဟုတ်။ ΔFosB နှင့် FosB မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အာရုံကြော plasticity ်ပတ်သက်နေကူးယူအချက်များ၏ Fos မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်; အကြားဆက်သွယ်မှုကို electroacupuncture၏ကုသမှု အရက် အလွဲသုံးစားမှုနှင့် Fos မိသားစုထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကပြုပြင်ထားသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုအရက်သောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာအီသနောအမြောက်အမြားသောက်ကြွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ ကြွက်အီသနော၏တည်ငြိမ်သောအခြေခံအောင်မြင်သည့်အခါ စားသုံးမှု, electroacupuncture (100 Hz သို့မဟုတ်2Hz, 30 မိနေ့ရက်တိုင်း) 36 ရက်ဆက်တိုက် Zusanli (ST6) မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အဆင့် FosB/ ΔFosB in ဆုလာဘ်-ဆက်စပ် ဦးနှောက် တိုင်းဒေသကြီးများ immunohistochemistry အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့၏စားသုံးမှုနှင့် 100 Hz အောက်မှာကြွက်များတွင်အီသနောအဘို့အ preference ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် Hz2မဟုတ် electroacupuncture တပ်ရင်းသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါ လျှော့ချရေး ၏ရပ်စဲပြီးနောက်အနည်းဆုံး 72 နာရီထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည် electroacupuncture ကုသမှု။ ပြောင်းပြန် 100 Hz electroacupuncture ၏စားသုံးမှုနှင့်သဘာဝကြိုးအေးဂျင့် sucrose များအတွက် preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်, FosB/ ΔFosB အဆင့်ဆင့် အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် striatal ဒေသနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior ဒေသအောက်ပါတိုးပွားလာခဲ့သည် ပိုမိုသော အီသနော စားသုံးမှုဒါပေမယ့်ခြောက်ရက်ကြာ 100 Hz အပြီးလျှော့ချခဲ့သည် electroacupuncture။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုကြောင့်ခြောက်ရက်ကြာ 100 Hz ပြ electroacupuncture ကုသမှုကိုထိရောက်စွာအီသနောကိုလျော့နည်းစေ စားသုံးမှု နှင့်နာတာရှည်သောက်ကြွက်များတွင် preference ကို ပိုမိုသော အီသနောပမာဏ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု electroacupuncture ၏ကိုဆင်း-စည်းမျဉ်းကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါ FosB/ ΔFosB in ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်
အရက်အလွဲသုံးစားမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမေရိကန်နှင့်တစ်ဦးကိုအဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အထိ, အရက်အလွဲသုံးစားမှု (naltrexone, acamprosate နှင့် disulfuram) ၏ကုသမှုများအတွက်သာသုံး FDA က-approved မူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါတယ်။ ပျှမ်းမျှတွင်ဒီဆေးတွေရေရှည်အရက်သောက်လျှော့ချသာအလယ်အလတ်အောင်မြင်မှုလိုက်လျော , , ။ ထို့ကြောင့်, အသစ်သောကုထုံးလိုအပ်နေပါသည်။ အပ်စိုက်ကုထုံး, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အားဖွငျ့ကိုယျခန်ဓာအပေါ်အချို့သောအချက်များလှုံ့ဆော်ပါဝင်သည်ဟု, အနှစ်တထောင်ဘို့တရုတ်များတွင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော Zusanli (ST36) အဖြစ် acupoint ထံမှအပ်စိုက်ကုထုံးအချက်ပြမှုများ, ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်မှတဆင့်ကူးစက်သောဘယ်လိုနေဆဲလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်သော်လည်းကအပ်စိုက်ကုထုံးအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ afferent Impulses သတင်းပို့အဓိကအားAβနှင့်AΔအမျှင်များကမှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ကြောင်းသွင်ပြင်လက္ခဏာထားပြီး ။ အပ်စိုက်ကုထုံးဟာကျောရိုးမှ Impulses သတင်းပို့ပေးပို့သည့်ကြွက်သားအတွက်သေးငယ်တဲ့ myelinated အာရုံကြောအမျှင်, မြှင့်လုပ်ဆောင်, ပြီးတော့သုံးစင်တာများ (ကျောရိုး, midbrain နှင့် pituitary-hypothalamus) မြှင့်လုပ်ဆောင်သုံးယောက်နဲ့အတူ Endorphins (enkephalin, beta ကိုနဲ့အတူ Endorphins နှင့် dynorphin) နှင့်အခြား monoamines များလွှတ်ပေးရေး , လေးနက်ဇီဝကမ္မဆိုးကျိုးများနှင့် Self-သည်အနာပျောက်စေသောယန္တရားကိုဆွဲထုတ် ။ ထို့ကြောင့်အပ်စိုက်ကုထုံးပျို့အပါအဝင်တချို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ, များအတွက်ထိရောက်သောယုတ်, နာကျင်မှုအဖြစ်ကျယ်ပြန့်မှတ်ယူထားပြီး  နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု ။ လက်ရှိရရှိနိုင် pharmacological ကြားဝင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အပ်စိုက်ကုထုံးကုထုံး၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အားသာချက်ကမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအဓိကဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲဝေးမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေနေဖို့ကူညီပေးဖို့အလားအလာရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်လက်တွေ့နှင့် preclinical လေ့လာမှုများလျှပ်စစ်ဆွ (electroacupuncture, EA ၏) နဲ့ပေါင်းစပ်အပ်စိုက်ကုထုံးသို့မဟုတ်အပ်စိုက်ကုထုံးအရက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုကြောင်းပြသကြ , ။ မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့2Hz ၏ EA ၏ကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုလျှော့ချကြောင်းပြသကြ ။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်အပ်စိုက်ကုထုံးနှင့်အထူးသဖြင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု၏အခြေခံယန္တရားနှင့် ပတ်သက်. များစွာသောမေးခွန်းများကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့အတူလိုက်ပါကြောင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဗီဇစည်းမျဉ်းမြားတှငျပွောငျးလဲဟာစွဲလမ်း phenotype မှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအကြံပြု ။ ငါဎအထူးသဖြင့်နှစ်ခုကူးယူအချက်များ - ΔFosBနှင့် CREB (Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း) စွဲ-related အာရုံကြော plasticity ်ပတ်သက်နေကြပြီ ။ အဆိုပါကူးယူအချက်Δ FosB, ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇထုတ်ကုန် FosB တစ်ဦးထူးထူးခြားခြားတည်ငြိမ် C-ကြှမျးခြင်းကိုမူကွဲ, ကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, Δအပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုအများစုမူးယစ်ဆေးဝါး, ပြီးနောက်စွဲ circuitry အတွင်းစုဆောင်း9-tetrahydrocannabinol နှင့်အီသနော . ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ကအတော်လေးတည်ငြိမ်သူ, နောက်ဆုံးသောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အဘို့အဦးနှောက်ထဲမှာဆက်လက်ရှိနိုငျပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့သော cyclin-မှီခို kinase5နှင့် dynorphin အဖြစ် dendritic ကျောရိုးဗိသုကာနှင့် Synaptic function ကိုပလတ်စတစ်နဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်မြောက်မြားစွာဗီဇ, ထိန်းညှိခြင်းအားဖြင့် , , ΔFosBမူးယစ်ဆေးထိတွေ့တုန့်ပြန်အမျိုးမျိုးသောအပြုအမူ phenotypes ကိုအထောက်အကူပြုရန်သော Synaptic plasticity mediates ။ PRကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အခြားဓါတ်ခွဲခန်းကနေ evious လေ့လာမှုများနာတာရှည်အရက်ထိတွေ့မှုကတော့ striatum ရဲ့ငျဒသေအတှငျးရှိΔFosB၏စုဆောင်းခြင်းနှင့် prefrontal cortex (PFC) သွေးဆောင်ကြောင်းပြသကြ , , endogenous opioid စနစ်များကို Activation ကပါဝင်ပတ်သက်ရသော ။ တည်ဆဲသက်သေအထောက်အထားများကို EA opioid receptors နှင့်အတူအပြန်အလှန်မှတဆင့်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုများလျော့ကျကြောင်းညွှန်ပြကြောင်းပေးထား , , ; နှင့်အပ်စိုက်ကုထုံးဟာ striatum ရဲ့ငျဒသေအတှငျးရှိ Fos စကားရပ်နှင့် CREB activation နှိပ်ကွပ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်း relapse attenuates ကျနော်တို့အရက်သောက်အပေါ် EA ၏ဖိနှိပ်မှုဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ထိုကဲ့သို့ FosB / ΔFosBပရိုတိန်းအဖြစ်ကူးယူအချက်များ, ကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါတွေးဆ။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုစမ်းသပ်ဖို့, EA ၏မျိုးစုံကိုအစည်းအဝေးများနာတာရှည်နေတဲ့အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုအရက်သောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (IE) နှစ်အောက်အီသနောအမြောက်အမြားသောက်ကြွက်များ၏နှစ်နိုင်ငံ acupoint ST36 မှာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ အတော်ကြာဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB / ΔFosB၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအနောက်တိုင်းချေထက်ပိုမိုမြင့်မား sensitivity ကိုရှိပြီး သာ. ကြီးမြတ်ခန္ဓာဗေဒအသေးစိတျကိုထောက်ပံ့ပေးရာ immunohistochemistry, သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် .
အားလုံးစမ်းသပ်ချက်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်နှင့်နယူးဂျာစီပြည်နယ်, Newark ၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုဆေးပညာတက္ကသိုလ်ကော်မတီနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ, နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကအတည်ပြုခဲ့သည် ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Sprague-Dawley (SD) ကြွက် (250-350 ဂရမ်အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ရဲ့ start မှာ Taconic လယ်ယာ, နယူးယော့) တစ်ဦးချင်းလေဝင်လေထွက်လှောင်အိမ်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်တစ်ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသောအခန်းတစ်ခန်း (ကို C ° 20-22) တွင်တစ်ဦးအပေါ်ထားရှိမည် 12-ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ (6 pm မှာချွတ်ထွန်း) ။ အစားအစာနှင့်ရေကြော်ငြာ libitum ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များပထမဦးဆုံးတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်များအတွက် homecage ပတ်ဝန်းကျင်ကို acclimatized ခဲ့ကြသည်နှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆန္ဒအလျောက်အဆိုပါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုအရက်သောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်မှာအီသနောသောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် , , , , ။ တနင်္လာနေ့ 24 ညနေ: အတိုချုပ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် 20 မှာစတင် 6% (v / v) ရေထဲမှာအီသနောနှင့်ရေများထဲမှပုလင်းတွေထဲကပုလင်းမှ 00-ဇတစ်ပြိုင်တည်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ 24 ဇပြီးနောက်, အီသနောပုလင်းလာမည့် 24 ဇများအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယရေပုလင်းဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ဒီပုံစံဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်သောကြာနေ့အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ အဆိုပါကြွက်များကိုရေနှစ်ပုလင်းမှန့်အသတ်လက်လှမ်းခဲ့တစ်ပတ်၏အခြားရက်။ အီသနောဟာကြွက်မှအကဲဖြတ်အခါနေ့ရက်ကာလသည်အီသနောပုလင်းများ၏နေရာချထားဘက်ဦးစားပေးဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန် alternated ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ပထမသုံးအီသနောအစည်းအဝေးများအတွက် 5% အီသနောဖြေရှင်းချက်မှ 20% sucrose ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ပြုပြင်မွမ်းမံလျှင်မြန်စွာနှင့်သိသိသာသာအရှိန်အီသနောစားသုံးမှု (သဖန်းသီး။ 1) ။ ကိုလောင်အီသနောသို့မဟုတ်ရေပမာဏကိုသုံးစွဲနိုင်မီနှင့်လက်လှမ်း၏ 24 ဇပြီးနောက်ပုလင်းအလေးချိန်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်များ၏အလေးချိန်ကနျြးမာရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ကီလိုဂရမ်လျှင်အီသနောစားသုံးမှု၏ဂရမ်တွက်ချက်ဖို့သောကြာနေ့မှတဆင့်တနင်္လာနေ့နေ့စဉ်တိုင်းတာခဲ့သည်။ အီသနောစားသုံးမှုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ကီလိုဂရမ်လျှင်လောင်အရက်၏ဂရမ်တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးစားပေးမှုအချိုး (%): အီသနောစားသုံးမှု၏အဆိုပါ preference ကိုအချိုးကိုအောက်ပါပုံသေနည်းများကတွက်ချက်ခဲ့သည် = အီသနောဖြေရှင်းချက်စားသုံးမှု (ml / 24 h) / စုစုပေါင်းအရည်စားသုံးမှု (ml / 24 h ethanol solution + ml / 24 h water) ။ ကြွက်များကို (၄) ပတ် (အီသနောပါ ၀ င်မှု ၁၂ ခု) အတွက် ၂၀% အီသနောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်စဉ်ကာလအတွင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကြောင့်ယိုဖိတ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြွက်မပါသောလှောင်အိမ်ထဲတွင်ရေပါသောပုလင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယိုဖိတ်မှုအမြဲတမ်း <20 ml (စုစုပေါင်းအရည်စားသုံးမှု၏ 4%) ဖြစ်ခဲ့သည်။
Sucrose သော induction အလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှုနှင့်အထီး Sprague-Dawley (SD) ကြွက်မြင့်မား preference ကိုသွေးဆောင်။
အဆိုပါ 13 တွင်th အီသနောအရက်သောက် session တစ်ခု, သွေးနမူနာဎကြွက်များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမြီးသွေးကြော (ထံမှကောက်ယူခဲ့သည် = 11% အီသနောနှင့်ရေမှ 30 မိ access ကိုအောက်ပါ 20) ။ အဆိုပါနမူနာ4rpm မှာ 15 မိဘို့ 8000 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ centrifuged ခဲ့ကြသည်နှင့်အသီးအသီးသောအသွေးကိုနမူနာအနေဖြင့် 10 μlပလာစမာ spectrophotometric နည်းလမ်း enzyme nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide-အရက် dehydrogenase (NAD +-ADH) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည် .
သောက်သုံးရေအတွက် EA ၏-သွေးဆောင်လျှော့ချရေး, သီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ (ဎအရက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် = ကြွက်၏ 8) အရက်အရက်သောက်သည်ဆင်တူပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း-access ကို Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုအရက်သောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အောက်မှာ 5% sucrose ဖြေရှင်းချက်သောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ 5% sucrose ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုများအရသိရသည်ရှေးခယျြခဲ့သညျ ,  နှင့်အရက်စားသုံးမှုအပေါ် opioid အဲဒီ receptor ရန်, SoRI-9409 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကကြွက်လေ့လာမှု ။ SD ကကြွက် sucrose နှင့်ရေမှဝင်ရောက်ခွင့်၏ 12 အရက်သောက်အစည်းအဝေးများအပြီးတသမတ်တည်းအခြေခံအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီပြီးမှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, 100 Hz ကို EA သို့မဟုတ်အတုအယောင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
နာတာရှည်အီသနောမြင့်မားသောပမာဏကိုလောင်ကြောင်းကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ်ကို EA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့, 100 Hz EA ၏သမင်ဒရယ်ခြေလက်များ၏ဒူးအဆစ်အနီးတွင်တည်ရှိပြီးနှစ်နိုင်ငံ ST36 မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့2မီလီမီတာအဆိုပါ tibia ၏ anterior tubercle မှ lateral; EA ၏ 30 30 ရက်ဆက်တိုက် (တနင်္လာနေ့မှတဆင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သုံးနှစ်ဆက်တိုက်အရက်သောက်အစည်းအဝေးများ) အတွက်, ကြိုတင်အီသနောရန်လက်လှမ်းရန်, နေ့တိုင်း6မင်းမင်းလျှောက်ထားခဲ့သည်။
အားလုံးကြွက်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကြိုတင် EA ၏ကုသနည်းမှ2ရက်ဆက်တိုက်3မိ / နေ့အဘို့အ prehandled ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းစမ်းသပ်နေ့ရက်တွင်, isoflurane နှင့်အတူအလင်းမေ့ဆေးအောက်မှာ EA ၏နှင့်အတုအယောင်အဖွဲ့များကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ကြွက်ပေါ့ပေါ့တန်တန်, ၎င်းတို့၏မျက်စိဖုံးအုပ်နေတဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ထိန်သိမ်းအပေါ် fixed ခံရပါဝင်ပတ်သက်သောစဲခဲ့သည် ။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်, ကြွက်အေးဆေးတည်ငြိမ်ခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏ခြေလက်အင်္ဂါများနှင့်အမြီးလွတ်လပ်စွာ extruded နိုငျသညျ။ 0.35 မီလီမီတာ၏ 13 မီလီမီတာနှင့်အရှည်၏အချင်းနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုစွန်ခံ-သံမဏိတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် (EA ၏အုပ်စုတစုအတွက်) ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံး၏ ST2 သို့ 3-36 မီလီမီတာနှင့် ပတ်သက်. ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်မေ့ဆေးအနေဖြင့်နှိုးပြီးနောက် 10 မိ EA ၏ (သို့မဟုတ်အတုအယောင်) အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးပရိုဂရမ်သွေးခုန်နှုန်းမီးစက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်စတုရန်း-လှိုင်းဆွနှင့်အတူတစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ (ဟန် Actens WQ 1002F, Aeron optoelectronics နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်း, ဘေဂျင်း, တရုတ်) ကို EA ၏အုပ်စုနှစ်ခုတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကနေတစ်ဆင့်ပေးထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ EA ၏ကြိမ်နှုန်း 100 Hz ကြီးနှင့်ပြင်းထန်မှု (0.2-0.3 Ma ခန့်) ကြွက်သားအလင်းတုန်လှုပ်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါချိန်ညှိခဲ့ပါတယ်။ အတုအယောင်အုပ်စု, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အမြီး၏ Proximity ဒေသကနေ (1 /5အမြီးအရှည်, အမြီး၏ Non-acupoints သို့ထားရှိခဲ့ကြသည် , ) နှင့်မျှမကလက်ရှိဆွလျှောက်ထားခဲ့သည်။ အီသနော (သို့မဟုတ် sucrose) နှင့်ရေစားသုံးမှုပြီးတော့အရက်သောက်စတင်ခြင်းပြီးနောက် 24 ဇတှငျမှတျတမျးတငျထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ6ကုသမှုရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းကြွက်သုံးအီသနော-အရက်သောက်အစည်းအဝေးများ (; တစ်ရက် 1, သောကြာနေ့, နေ့ 3, တနင်္လာနေ့တစ်ရက် 6, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ရှိခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်း EA ၏အုပ်ချုပ်မှုမီနှင့်ပြီးခဲ့သည့် EA ၏အုပ်ချုပ်မှုအတွက်အခြေခံသို့မဟုတ် Post-ကုသမှုအခြေခံသောက်သုံးရေအဆင့်အဖြစ်အသီးသီးမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်အရက်သောက် session တစ်ခုအတွင်းမှာအီသနောစားသုံးမှု။ နာတာရှည်အီသနောမြင့်မားသောပမာဏကိုလောင်ကြောင်းကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ်အနိမ့် (2 Hz) ကြိမ်နှုန်းကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများ၏သက်ရောက်မှု2Hz EA ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် ST36 (နေ့ရက်တိုင်းမိနစ် 30) မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြွက်များ၏သီးခြားအုပ်စုထဲမှာ check လုပ်ထားခဲ့သည် ခြောက်လရက်ဆက်တိုက်။ အီသနောနှင့်ရေစားသုံးမှုအထက်ပါစမ်းသပ်မှုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
ကျနော်တို့နာတာရှည်အီသနောစားသုံးမှုတစ်ခွဲဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ FosB / ΔFosB၏စုဆောင်းခြင်း induces ကြောင်းမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ ။ အီသနောစားသုံးမှုအတွက် EA ၏-သွေးဆောင်လျှော့ချရေး FosB / ΔFosBစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့ mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏ဆုလာဘ်-related ဒေသများရှိ FosB / ΔFosB immunoreactivity (IR) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကြွက်များ၏တစ်ဦးကအုပ်စုတစု (ဎ = 12) ပထမဦးဆုံးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပြုပြင်ထားသောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို Two-ပုလင်းရွေးချယ်မှုအရက်သောက်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအီသနောသောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်း (ဎ: ကြွက်ဆန္ဒအလျောက်အီသနောမြင့်မားသောပမာဏစားသုံးတဲ့အခါသူတို့နှစ်ဦးကိုလူမျိုးကွဲသို့ခွဲခြားခဲ့သည် = 6) ဎနှစ်နိုင်ငံ ST100, အမြီးမှာအခြားအတုအယောင်ကုသမှု (အနည်းဆုံး 36 Hz ကို EA လက်ခံရရှိ =6ရက်ဆက်တိုက် 6) ။ အဆိုပါ6ကုသမှုရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းကြွက်သုံးအီသနော-အရက်သောက်အစည်းအဝေးများ (; တစ်ရက် 1, သောကြာနေ့, နေ့ 3, တနင်္လာနေ့တစ်ရက် 6, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (အီသနောရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှု, ဎအတွက်ကြွက်များ = 5) န့်အသတ်မရှိဘဲရေနှင့်အစားအစာမှဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ယင်းအီသနောရင်တော့မှားမယ်နှင့်အီသနော-သောက်သုံးကြွက်အကြားခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ရဲ့အဆုံးမှာရှိခဲ့သည်။
EA ၏သို့မဟုတ်အတုအယောင်တွေနဲ့ကုသအီသနောအရက်သောက်ကြွက်များချက်ချင်း 24 ဇအီသနောလက်လှမ်း၏နောက်ဆုံး session တစ်ခုအပြီးယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ အီသနောရင်တော့မှားမယ်ကြွက်ကိုလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ ကြွက် ketamine / xylazine နှင့်အတူ overdosed ခဲ့ကြသည် (80 / 10 mg, ip / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် transcardially4M ကဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ကြားခံ (pH ကို 0.1) တွင် 7.4% paraformaldehyde အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အအေးဆားနှင့်အတူ perfused ။ ဦးနှောက် (နေ့ချင်းညချင်း2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်,4M ကဖော့စဖိတ်ကြားခံ, သော pH4အတွက် 20% sucrose မှာ), ကိုဖယ်ရှား postfixed (0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 7.4 နာရီ,) တူညီသော fixative ဖြေရှင်းချက်နှင့် cryoprotected ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ forebrain ၏ serial 30-μm Coronal ကဏ္ဍများကိုတစ်ခဲ microtome (Microm HM550, Walldorf နှင့်ဂျာမန်) အပေါ်ဖြတ်ခဲ့ကြနှင့်ဦးနှောက်အပိုင်းတစ် 1-In-4 စီးရီး FosB / ΔFosB-ပရိုတိန်း၏ immunohistochemical ထောက်လှမ်းဘို့လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့သည်။ ကဏ္ဍများပဋိ၏အောက်ပါစီးရီးနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်: ဒယ်အိုး-FosB antibody ကို (1 2000, # SC-48;4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, biotinylated Anti-ယုန် IgG (2 နာရီ, 1 မှာ Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz, ကာလီဖိုးနီးယား) နေ့ချင်းညချင်း, 200) (Vector Laboratories, Burlingame,, CA) ။ ကဏ္ဍများထို့နောက်တစ်ဦး avidin-ဓါတ်-horseradish peroxidase ရှုပ်ထွေးဖြေရှင်းချက် (45 မိ) (Vector Elite Kit, Vector Labs က, Burlingame ကယ်လီဖိုးနီးယား) နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ Horseradish peroxidase လှုပ်ရှားမှုနီကယ်-diaminobenzidine (Vector Laboratories, Burlingame,, CA) နဲ့မြင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ် group မှကဏ္ဍများတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။ အပိုင်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပေါ်မူလတန်း antisera ၏ပျက်ကွက် immunoreactivity တစ်ဦးဆုံးရှုံး။ ကဏ္ဍများ, chrome-alum ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း, နှင့်အဖုံးချော်ခဲ့သည်။
FosB / ΔFosB immunoreactivity ၏ Quantization
FosB / ΔFosB immunoreactivity အတွက်အပြောင်းအလဲများ prefrontal cortical (PRL, IL နှင့် orbitofrontal cortex (OFC)), NAc (core နဲ့ shell ကို) နှင့် dorsolateral striatum (DLS) နှင့် dorsomedial striatum (DMS) မှကဏ္ဍများအတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဦးနှောက်ဒေသများ Paxinos နှင့် Watson ရဲ့ Atlas အပေါ်အခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ ။ quantitative တိုင်းတာခြင်း (Micron စက္ခုဗေဒ, အာရဇ် Knoll, NJ) အရောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာက Nikon DS-Ri80 (Micron စက္ခုဗေဒ, အာရဇ် Knoll, NJ) နဲ့ interfaced တစ်ဦးက Nikon Eclipse 1i တောက်ပသောလယ်ဏုပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးကူညီ image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်သုံးပြီးနှင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် တစ်ဦး NIS-Element တွေကို BR 3.0 software ကို (Micron စက္ခုဗေဒ, အာရဇ် Knoll, NJ) နဲ့ကွန်ပျူတာ။ ပုံရိပ်တွေချဲ့× 20 မှာရရှိသောခဲ့ကြသည်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်၌တရားနှင့်လက်ဝဲဘက်ခြမ်းကနေပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်ကနေအမည်တပ်ထားသောအရေးပါနှစျယောကျရှုထောင်ရေတွက် [200 ×ပုံရိပ်တွေ (0.1 မီလီမီတာ2 အကျိုးစီးပွားဦးနှောက်ဒေသများအတွင်း FosB / ΔFosBကဲ့သို့ immunoreactive အရေးပါ၏ဧရိယာ)] NIS-Element တွေကို BR 3.0 software ကို အသုံးပြု. တိရစ္ဆာန်အနှုန်းသုံးသီးခြားကဏ္ဍများအနေဖြင့်ကုသမှုအခြေအနေအသိပညာမပါဘဲဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
ဒေတာအားလုံးကို SEM (ယုတ်၏စံအမှား) ±ယုတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အမူအကျင့်ဒေတာ [နေ့က 0, 1, 3, postbasline (5 နေ့က), အခြေခံ (7 နေ့က)] အဓိကကုသမှုအချက်များ (EA ၏သို့မဟုတ်အတုအယောင်) နှင့်ရက်ပေါင်းနှင့်အတူနှစ်ယောက်လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအတိုင်းအတာ ANOVA (RM ANOVA) နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ Tukey post ကို hoc ကုသမှုအပြန်အလှန်×တစ်ရက်အခါဆန်းစစ်ဆနျ့ကငျြဘခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးကောက်ယူခဲ့သည် p<0.05 ။ Immunohistochemical ရလာဒ်များကို ANOVA ကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး Tukey စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်သည်။
ပထမသုံးအရက်သောက်အစည်းအဝေးများအတွက်ဆက်ပြောသည် sucrose နှင့်အတူ 20% အီသနော (IE) မှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကိုအလွန်အကျွံစားသုံးမှုနှင့်အထီး SD ကကြွက်များတွင်အီသနောအဘို့အမြင့်မား preference ကို induces
ကျနော်တို့အရင်ကက IE လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအီသနော၏အလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်ကိုမသောက်ရန် SD ကကြွက်များ၏အများစုဦးဆောင်ကြောင်းပြသ ။ ဤလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးသောက်သုံးခြင်းအစည်းအဝေးတွင် 5% sucrose ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် SD ကြွက်များမှသောက်သုံးသောအီသနောပမာဏကိုအလွန်များပြားစေခဲ့ပြီး၊သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) ။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်4မှာth 12 မှth အစည်းအဝေးများသောက်သုံး, SD ကကြွက်ဟာတူညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်မှာပေမယ့် sucrose သော induction မရှိဘဲကြွက်များအားဖြင့်စားသုံး 8.2 ± 0.1 g / ကီလိုဂရမ် / 24 ဇ, ထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြရသော 4.1 ± 0.1 g / ကီလိုဂရမ် / 24 ဇ, လောင်လေ၏။ Two-လမ်း RM ANOVA (ကုသမှုများအတွက်အရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF1, 337 = 269.63, p<0.001), နေ့F11, 337 = 2.09, p<0.05), နှင့်ကုသမှု×နေ့ကအပြန်အလှန် (F11, 337 = 6.51, p post-hoc4မှာကြွက်များအားဖြင့်စားသုံးအီသနောဒယုတ်ပမာဏ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာth 12 မှth အရက်သောက်အစည်းအဝေးများ sucrose သော induction နှင့်မပါဘဲအုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ပြသခဲ့သည်။
sucrose သော induction နှင့်အတူကြွက်များတွင်အီသနောများအတွက်ဦးစားပေး (sucrose သော induction မရှိဘဲသူတို့အားကြွက်လည်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ကြီးသင်္ဘောသဖန်း။ 1B) ။ အဆိုပါ4စဉ်အတွင်းth 12 မှth အစည်းအဝေးများ, အီသနောများအတွက်ယုတ် preference ကိုအသီးသီးနှင့် sucrose သော induction မပါဘဲကြွက်များအတွက် 36.4 ± 0.4% နှင့် 22.0 ± 0.8%, ဖြစ်ခဲ့သည်။ Two-လမ်း RM ANOVA (ကုသမှုများအတွက်အရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF1, 337 = 125.73, p<0.001) နှင့်ကုသမှု×အချိန်အပြန်အလှန် (F11, 337 = 5.08, p<0.001) အချိန်ပြင်းထန်သောစိတ်သဘောထားနှင့် (F11, 337 = 1.79, p = 0.05) ။ post-hoc4မှာအီသနောများအတွက် preference ကို၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာth 12 မှth အစည်းအဝေးများသောက်သုံးအားလုံး (sucrose မပေးသောကြွက်များတွင်ထက် sucrose နှင့်အတူကြွက်များတွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ p<0.001, သင်္ဘောသဖန်း။ 1B).
ကျနော်တို့ချက်ချင်းအီသနောမှဝင်ရောက်ခွင့်၏ 13-မိကာလပြီးနောက် 30th အရက်သောက်အစည်းအဝေး၌အထက်ပါဖော်ပြထားတဲ့ sucrose သော induction အရက်သောက်အုပ်စုတစ်စုကနေကြွက်၏ BEC တိုင်းတာ။ အဆိုပါ BEC% MG 26.8 ± 136.0 ပျမ်းမျှနှင့်အတူ% MG 60.5 ထံမှ 10.4 မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ BEC နှင့်စားသုံးပါ g / kg အအီသနောတို့အကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှု (r ရှိခဲ့သည်2 = 0.75, ဎ = 11, p<0.001; ဒေတာ) ရုပ်ပြမဟုတ်။
(100 Hz) မြင့်မားတဲ့, ဒါပေမယ့်မရအနိမ့်အကြိမ်ရေ၏အကွိမျမြားစှာအစည်းအဝေးများ (2 Hz) EA ၏ကုသမှုအလွန်အကျွံစားသုံးမှုနှင့်အီသနောအဘို့အ preference ကိုလျော့ကျစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်မရ sucrose
မကြာသေးမီကကြွက်လေ့လာမှုအမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း (100 Hz) ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါလျှော့ချအတွက်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း (100 Hz) ၏တစ်ခုတည်း session တစ်ခုထက် ပို. ထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်ပြီးနောက်-အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုးစုံအစည်းအဝေးများ၏ EA ၏ကအနည်းဆုံး7နေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာ ။ ကျနော်တို့ 100 Hz EA ၏ကုသမှုမျိုးစုံအစည်းအဝေးများနာတာရှည်အီသနောအလွန်အကျွံပမာဏသောက်ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုပွောငျးလဲနိုငျရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရှာ၏။ သူတို့အီသနောစားသုံးမှုတည်ငြိမ်အခြေခံအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိပြီးမှကျနော်တို့ (ကိုတွေ့မြင်ကြွက်မှ ST100 သို့မဟုတ်အတုအယောင်မှာ 36 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများလျှောက်ထား သဖန်းသီး။ 1) ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သင်္ဘောသဖန်း။ 2A, ဆက်တိုက်6ရက်ကြာ 100 Hz EA ၏, 30 နေ့ရက်တိုင်း MIN ပေမယ်အတုအယောင်ကုသမှုသိသိသာသာ 24-ဇ access ကိုကာလအတွင်းအီသနောစားသုံးမှုလျှော့ချမဟုတ်ပါဘူး။ Two-လမ်း RM ANOVA (ကုသမှုသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF1, 51 = 18.59, p<0.001), နေ့F4,51 = 9.81, p<0.001) နှင့်ကုသမှု×နေ့ကအပြန်အလှန် (F4,51 = 5.31, p = 0.001) ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေ့က 24 နှင့်3အပေါ် 6-ဇ access ကိုကျော်အီသနောစားသုံးမှုရှင်းလင်းစွာအတုအယောင်၏ (အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု EA ၏ကုသမှုအုပ်စုတွင်လျော့နည်းသွားခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ p<0.001, သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ EA ၏ကုသမှုနေ့က6အပေါ်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည့်အခါထူးခြားသည်, လျော့ချရေး (ကနောက်ဆုံး EA ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက် 48-72 ဇအရက်သောက် session တစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်p<0.01, EA vs. အတုအယောင်, သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ အခြေခံသောက်သုံးရေအဆင့်ဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအားလုံးစမ်းသပ်မှုရက်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ်အတုအယောင်ကုသမှုမျှမခြုံငုံအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း (100 Hz) ကို EA ၏အကွိမျမြားစှာအစည်းအဝေးများသိသိသာသာအလွန်အကျွံစားသုံးမှုနှင့်အီသနောအဘို့အ preference ကိုလျော့နည်းသွားသည်။
24-ဇအချိန်အမှတ်မှာအီသနောများအတွက် preference ကိုအချိုးဟာ EA ၏-အခမဲ့အခြေခံကာလအတွင်းသိသိသာသာအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ခဲ့ဆန်းစစ်ပေမယ့်, ဒီအချိုးသိသိသာသာ 100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအုပ်ချုပ်မှုအပြီးလျော့ချခဲ့သည်။ Two-လမ်း RM ANOVA (ကုသမှုသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF1,51 = 11.22, p = 0.004), တစ်ရက် (F4,51 = 5.49, p<0.001, နှင့်အပြန်အလှန်သက်တမ်း (F1,51 = 5.66, p post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားလုံး (24 Hz ကို EA ကုသအုပ်စုတစ်စု၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများအတွက်တစ်နေ့3နှင့်6အပေါ် 100-ဇအချိန်အမှတ်မှာအီသနောများအတွက် preference ကိုအတုအယောင်များထက်နိမ့်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှား p<0.001, သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ EA ၏အုပ်ချုပ်ရေးရပ်စဲခံခဲ့ရသည့်အခါထို့အပြင် preference ကိုအချိုးအတွက် EA ၏-သွေးဆောင်လျှော့ချရေး (ထို 48-72 ဇအရက်သောက် session တစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်p<0.05, EA vs. အတုအယောင်, သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ အီသနောများအတွက် preference ကိုအပေါ်အတုအယောင်ကုသမှုမျှမခြုံငုံအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (အီသနောများအတွက်အခြေခံ preference ကိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်မှုရက်ရှိခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ စိတ်ဝင်စားစရာဆက်တိုက်6ရက်ကြာ 100 Hz EA ၏ကုသမှုကိုလည်းရေစားသုံးမှု (ကုသမှုအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု [အပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်F1,51 = 5.21, p<0.05] နှင့်နေ့ရက် [F4,51 = 2.97, p<0.05], ကုသမှု၏အဘယ်သူမျှမအကျိုးသက်ရောက်မှု×အချိန်အပြန်အလှန် [F4,51 = 1.23, p = 0.31]) (သင်္ဘောသဖန်း။ 2C) ။ တစ်ရက် 24 နှင့်5အပေါ် 7-ဇအချိန်အချက်မှာရေစားသုံးမှုသိသိသာသာကို EA အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည် (အတုအယောင်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကြွက်ကုသp<0.05) ။ စမ်းသပ်ကာလအားလုံးတွင်အတုအယောင်ကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၆ ရက်ကြာ6Hz EA ဆက်တိုက်အားဖြင့်စုစုပေါင်းအရည်စားသုံးမှုကိုမထိခိုက်ပါ။သင်္ဘောသဖန်း။ 2D).
ကျနော်တို့အရင်ကတစ်ခုတည်းအနိမ့်သော်လည်းမမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း EA ၏အလယ်အလတ်အီသနောစားသုံးမှုလျှော့ချကြောင်းပြသ ။ EA ၏မျိုးစုံကိုအစည်းအဝေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းယင်း၏ကြိမ်နှုန်းပေါ်မူတည်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ST2 မှာအနိမ့်အကြိမ်ရေများစွာအစည်းအဝေးများ (36 Hz) EA ၏အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့နာတာရှည် sucrose သော induction အတူ IE ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်မှာအီသနောအမြောက်အမြားကိုလောင်ကြောင်းကြွက်မှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ် သင်္ဘောသဖန်း။ 3Aဤစမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်တွင်,2Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများအားလုံးစမ်းသပ်ရက်ပေါင်းအပေါ် 24-ဇ access ကိုကာလအတွင်းအီသနောစားသုံးမှုပြောင်းလဲဘူး (သင်္ဘောသဖန်း။ 3A) ။ အီသနောစားသုံးမှုများအတွက် two-လမ်း RM ANOVA (ကုသမှုအဓိကသက်ရောက်မှုထုတ်ဖေါ်ဖို့ပျက်ကွက်F1, 37 = 1.43, p> 0.05) နေ့,F3,37 = 1.15, p> 0.05) နှင့်ကုသမှု×အချိန်အပြန်အလှန် (F3,37 = 0.25, p> 0.05) ။ ထို့ကြောင့်,2Hz EA ၏အစည်းအဝေးများအများအပြားစမ်းသပ်မှုရက်ပေါင်း 24 နာရီအချိန်အချက်မှာ [အီသနောများအတွက် preference ကိုအချိုးကိုမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး [ကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (F1, 37 = 0.003, p = 0.95), တစ်ရက် (F3,37 = 0.54, p = 0.65) သို့မဟုတ်ကုသမှုအချိန်အပြန်အလှန်× (F3,37 = 0.30, p = 0.82), သင်္ဘောသဖန်း။ 3B]; သို့မဟုတ်ရေစားသုံးမှုနှင့်စုစုပေါင်းအရည် (Data ပြမပါ) ။
အနိမ့်အကြိမ်ရေ၏အကွိမျမြားစှာအစည်းအဝေးများ (2 Hz) ကို EA ဟာအလွန်အကျွံ၏စားသုံးမှုနှင့်အီသနောအဘို့အ preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများအားဖြင့်သွေးဆောင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်လျော့ချရေးအီသနောမှတိကျတဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့နှစ်ပုလင်းရွေးချယ်မှုအရက်သောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက် 5% sucrose တစ်ခုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို အသုံးပြု. နှစ်သက်သောပစ္စည်းဥစ္စာ sucrose ၏စားသုံးမှုတိုင်းတာ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သဖန်းသီး။ 4sucrose အဘို့, sucrose စားသုံးမှုမဟုတ်သလို preference ကိုမ 24-ဇအချိန်အမှတ် ST100 မှာ 36 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများအားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်မှာ။ sucrose စားသုံးမှုများအတွက် two-လမ်း RM ANOVA (ကုသမှုအဓိကသက်ရောက်မှုထုတ်ဖေါ်ဖို့ပျက်ကွက်F1, 18 = 0.23, p = 0.65), တစ်ရက် (F3,18 = 1.39, p = 0.27) သို့မဟုတ်ကုသမှုအချိန်အပြန်အလှန်× (F3,18 = 0.19, p = 0.90) ။ ထို့အပွငျအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက်ရေစားသုံးမှုသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းအရည် (Data ပြမပါ) သော်လည်းကောင်းအဘို့ကို EA နှင့်အတုအယောင်များအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။
100 Hz ကို EA ၏အကွိမျမြားစှာအစည်းအဝေးများ၏စားသုံးမှုနှင့် sucrose များအတွက် preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
100 Hz ကို EA ၏အကွိမျမြားစှာအစည်းအဝေးများတိကျတဲ့ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB / ΔFosBအလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှု-သွေးဆောင်စုဆောင်းခြင်းလျော့ကျ
ရလဒ်s အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ဆက်တိုက်6ရက်ကြာ 100 Hz ကို EA ရွေးချယ်၏စားသုံးမှုနှင့်နာတာရှည်အီသနောအလွန်အကျွံပမာဏသောက်ကြွက်များတွင်အီသနောအဘို့အ preference ကိုလျှော့ချပါ။ ပြသ အတော်များများကလေ့လာမှုများΔFosB၏ persistent activation စွဲလမ်းမမှန်တစ်ဘုံလမ်းကြောင်းဖြစ်မည်အကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည် ။ ကျနော်တို့အရင်ကနာတာရှည်အီသနောစားသုံးမှုဟာ prefrontal cortex နဲ့ striatal ဒေသတွင်း၌ရွေးချယ်ΔFosBစုဆောင်းခြင်း induces ကြောင်းအစီရင်ခံ ; ထိုအဦးနှောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသကမောက်ကမဖြစ်မှု abstinent အရက်သမားအသစ်သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များ၏အီသနောတဏှာနှင့်ချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ (ထို mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏အောက်ပါဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင် FosB / ΔFosBမှာ IR အကဲဖြတ်သဖန်းသီး။ 5).
ကြွက်ဦးနှောက်၏ Coronal အပိုင်းသိထားကားချပ်။
FosB / ΔFosBစကားရပ်အီသနောနှင့် EA ၏ကုသမှုနှစ်ခုစလုံးတစ် function ကိုအဖြစ် striatal ဒေသအတွင်း differential စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် , FosB / ΔFosBမှာ IR နျူကလီးယပ် accumbens (NAc-Core) နှင့် dorsolateral striatum (DLS) (၏အဓိကအတွင်းစေ့စ့စပ်စပ်တိုးလာသဖန်းသီး။ 6), ဒါပေမယ့်မ dorsal shell ကို (NAc-ရှဲလ်) အတွင်းနှင့်နာတာရှည်အီသနောရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အတုအယောင်ကုသမှုနှင့်အတူအီသနောပမာဏစားသုံးကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် dorsomedial striatum (DMS) ။ 100 Hz ကို EA ၏အကွိမျမြားစှာအစည်းအဝေးများသိသိသာသာ (ရေရှည်အလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ DLS နှင့် NAc-Core အတွင်း FosB / ΔFosBမှာ IR လျော့နည်းသွားသဖန်းသီး။ 6) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက် NAc-Core (များတွင်ကုသမှုသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားသည့်တလမ်း ANOVA ကထောက်ပံ့F2, 33 = 6.27, p = 0.005) နှင့် DLS (F2, 33 = 28.54, p<0.001), ဒါပေမယ့် NAc-shell ကိုအတွက် (F2, 33 = 1.36, p> 0.05) နှင့် DMS (F2,33 = 2.47, p> 0.05) ။
အဆိုပါ NAc core ကို, အခွံ, dorsolateral striatum (DLS) နှင့် dorsomedial striatum (DMS) အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပုံမှန်ဒေသများသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ Photomicrographs ။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကနာတာရှည်အီသနောထိတွေ့စေ့စ့စပ်စပ် orbitofrontal cortex (OFC) တွင် FosB / ΔFosBမှာ IR တိုးပွါးကြောင်းအစီရင်ခံပေမယ့်မ medial prefrontal cortex ။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက် FosB / ΔFosBမှာ IR သိသိသာသာ (နာတာရှည်အတုအယောင်ကုသမှုနှင့်အတူအီသနောပမာဏစားသုံးကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် prefrontal cortex (PRL) ၏ prelimbic ဧရိယာ၏နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် OFC ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 7, p<0.001 အတုအယောင် vs. အီသနော) ရင်တော့မှားမယ်။ FosB / ΔFosB-အပြုသဘောအရေးပါရေတွက်အတုအယောင်အုပ်စုတစ်စုနှင့် prefrontal cortex (IL) ၏ infralimbic ဧရိယာထဲမှာအီသနောရင်တော့မှားမယ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်အတွက်အဘယ်သူမျှမစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှု။ 100 Hz ကို EA ၏အကွိမျမြားစှာအစည်းအဝေးများသိသိသာသာ FosB / ΔFosBအဆိုပါ PRL အတွက်မှာ IR, အ OFC နှင့် IL (အားလုံးလျော့နည်းသွား p<0.01 EA အုပ်စုတစ်စု vs. အတုအယောင်) ။ ထို့ကြောင့်တလမ်း ANOVA (IL အတွက်ကုသမှုသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့F2, 33 = 7.06, p = 0.003), PRL (F2, 33 = 18.61, p<0.001) နှင့် OFC (F2, 33 = 13.23, p
အဆိုပါ prelimbic (PRL) အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပုံမှန်ဦးနှောက်ဒေသများသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ Photomicrographs, အ prefrontal cortex ၏ infralimbic (IL) နှင့် orbitofrontal cortex (OFC) သင်းဖွဲ့။
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA)
VTA ဆုလာဘ်၏အရေးပါသောဦးနှောက်ဒေသဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုနာတာရှည် psychostimulant အုပ်ချုပ်မှုအထူး VTA ၏ posterior အမြီးအတွက်ΔFosB၏စုဆောင်းခြင်း induces ကြောင်းပြသ , ။ အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ် သဖန်းသီး။ 8အဆိုပါ VTA (Bregma - Bregma -5.20 မီလီမီတာမှ 6.8 မီလီမီတာ) ၏ posterior ဒေသတွင်း၌ FosB / ΔFosBမှာ IR စေ့စ့စပ်စပ် (နာတာရှည်ကြောင်းအီသနောထဲမှာရင်တော့မှားမယ်အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အီသနောပမာဏစားသုံးကြောင်းကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်p<0.001) နှင့်သိသိသာသာ EA ၏အစည်းအဝေးများပြီးနောက်လျှော့ချခဲ့သည် (p<0.001, EA အုပ်စုတစ်စု vs. အတုအယောင်) သော်လည်းမအတုအယောင်ကုသမှုပြီးနောက်။ အဆိုပါ posterior VTA အတွက် FosB / ΔFosBမှာ IR အပေါ်ကုသမှုတစ်ခုခြုံငုံအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F2,33 = 12.04, p<0.001, သဖန်းသီး။ 8).
အဆိုပါ posterior VTA များအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပုံမှန်ဦးနှောက်ဒေသများသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ Photomicrographs ။
ကျနော်တို့ ST100 ရွေးချယ် 30 ဇ access ကိုကာလအတွင်းအလွန်အကျွံစားသုံးမှုနှင့်အီသနောအဘို့အ preference ကိုလျှော့ချနှစ်နိုင်ငံ acupoint မှာ (36 နေ့ရက်တိုင်း MIN) ဤနေရာတွင်ကြောင်းခြောက်လုံးနေ့ 24 Hz ကို EA ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလျှော့ချရေးကို EA ကုသမှု၏ရပ်စဲပြီးနောက်အနည်းဆုံး 72 ဇများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီ EA ၏တပ်ရင်းအကျိုးကို-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် FosB / ΔFosBစကားရပ်လျော့နည်းသွားသည်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကတစ်ခုတည်း 20 အနိမ့် (2 Hz) MIN ကြောင်းအစီရင်ခံပေမယ် ST100 မမြင့်မားသော (36 Hz) ကြိမ်နှုန်း EA ၏ SD ကကြွက်များတွင်အီသနော၏အလယ်အလတ်စားသုံးမှုလျှော့ချပါပြီ ။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါလျှော့ချအတွက်မြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်းကို EA ၏တစ်ခုတည်း session တစ်ခုထက် ပို. ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ 100 (အီသနောအဘို့အမြင့်မား preference ကိုအချိုးနှင့်အတူ 8.2 Hz ကို EA အားလုံးကြွက်အီသနောမြင့်မားသောပမာဏ (0.1 ± 36.4 g / ကီလိုဂရမ်) ကိုလောင်ထားတဲ့အတွက်ပြုပြင်ထားသော IE ကိုသောက်ရေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အောက်မှာကြွက်များတွင်အလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှုလျှော့ချအတွက်ထိရောက်သောခဲ့ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး ) 0.4% ±။ ကျနော်တို့လက်ရှိလေ့လာမှုမှာဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များစောင့်ကြည့်မပြုခဲ့ပေမယ့်, ငါတို့ယခင်ကအလားတူအရက်သောက်အစီအစဉ်ကိုအောက်မှာကြွက်ပျော့ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များပြသလုပ်ခဲ့တယ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြ , ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကြွက်များ၏ BEC 60.5 ± 10.4 SD ကကြွက်၏ထက်နှစ်ခုနီးပါးကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားသော%, MG ခဲ့သည်  နဲ့ Long-အီဗန်ကြွက်များနှင့်ဆင်တူ  အရာရုပ်သိမ်းရေးဆိုင်းဘုတ်များပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိစမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်ရှိကြွက်များသည်အီသနောကိုမှီခိုမှုတိုးပွားလာပြီးရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများရှိနိုင်သည်။ မှတ်သားစရာမှာခြောက်ရက်ဆက်တိုက် ၁၀၀ Hz EA သည် ၂၄ နာရီဆက်သွယ်မှုကာလအတွင်းအခမဲ့အီသနောကိုစားသုံးမှုကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာဤ EA တပ်ရင်းသည်ရေစားသုံးမှုကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းတိရိစ္ဆာန်များသည်အီသနောသောက်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောလမ်းကြောင်းသို့သွားနေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ EA ကုသမှုရပ်စဲပြီးနောက်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ်လျှော့ချမှုကို ၇၂ နာရီအထိထိန်းသိမ်းထားသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၁၀၀ Hz EA ၏အစည်းအဝေးများသည်သဘာဝဆုလာဘ်များဖြစ်သောသကူဇруз၏စားသုံးမှုနှင့် ဦး စားပေးမှုကိုမပြောင်းလဲပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်သည်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုနှင့်အညီဖြစ်သည်။ EA ၏အစည်းအဝေးများသည်ဆေးကုသမှုခံယူသည့်ကာလအတွင်းအနည်းဆုံး ၇ ရက်ကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားသောမော်ဖင်းအကိုက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာကိုနှိမ်နင်းကြောင်းပြသသည်။ အနည်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသော preprodynorphin mRNA ၏အလျင်အမြန်တိုးမြှင့်သည့်အရာသည် ၁၀၀ Hz EA ၏အစည်းအဝေးများသည် dynorphin ၏ biosynthesis ကိုအရှိန်မြှင့်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့် EA ၏ရှည်လျားသောသက်ရောက်မှုသည် dynorphin ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဦး နှောက်ထဲမှာ 100 ရက် .
ယခင်သက်သေအထောက်အထားκ-opioid အဲဒီ receptor နှင့်အတူအပြန်အလှန်မှတဆင့် CNS အတွက်ဖြန့်ချိ dynorphin, (KOR) မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ၏ 100 Hz ကို EA-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကွောငျးဖျောပွသ , , ။ ထို့အပွငျ 100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် preprodynorphin mRNA များ၏ဆင်း-စည်းမျဉ်းပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်တစ်ခုတည်းကို EA ထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့ကြ ။ ဒါဟာ dynorphin-κ opioid စနစ်များ compulsive မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကားမောင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါသရုပ်ပြခဲ့ပြီး ။ dynorphin နှင့် KORs ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဟာသူတို့ရဲ့အနိမ့်အရက်သောက်များထက်အီသနော၏မြင့်မားကိုလောင်တဲ့သူကြွက်များတွင်နိမ့်ခဲ့ကြ , , ။ ထို့အပြင်ကြွက်များတွင် KOR agonist U50,488H ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုသိသိသာသာအီသနောစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေ အဆိုပါ KOR ရန်၏အုပ်ချုပ်မှုအီသနောစားသုံးမှုတိုးပွါးသော်လည်း ။ အရေးကြီးတာက, dynorphin နှင့် KOR အတွက် polymorphic လူသားတွေအတွက်အရက်၏တိုးချဲ့အန္တရာယ်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြ ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤအချက်အလက်များကို dynorphin / KOR သည့်စနစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအီသနောအရက်သောက်လျှော့ချဖို့ရာအတွက်, အီသနောအရက်သောက်ကျော် dynorphin တစ် modulatory အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။ 100 Hz EA ၏အထူး dynorphin လွှတ်ပေးရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်ကတည်းက ကျနော်တို့ dynorphin ကအနည်းဆုံး 100 Hz ကို EA တို့ကသွေးဆောင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်လျော့ချရေး၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိ mediates ကြောင်းတွေးဆ။ သို့သော်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် dynorphin ကမကထပြုခဲ့လျှော့ချရေးအခြေခံသည့်ယန္တရားလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ dynorphin ၏တိုးအားဖြင့်သွေးဆောင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်တစ်ဦးကလျှော့ချရေးကိုလည်းယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် , ။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများ dynorphin နောက်ဆက်တွဲအီသနောစားသုံးမှုအကြိမ်ကြိမ်ထိန်းညှိဖို့ postingestive တုံ့ပြန်ချက်များကိုစေခြင်းငှါညွှန်ပြပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာဘတ်ပါ၏။
Predynorphin ဗီဇΔFosBများအတွက်မှတ်တမ်းပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် , ။ over-စကားရပ်ΔFosB၏ NAc နှင့် dorsal striatum အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dynorphin စကားရပ်များ၏ဖိနှိပ်မှုမှတဆင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြိုးတုံ့ပြန်မှုတိုးလာ ။ 100 Hz ကို EA ဟာကျောရိုးထဲမှာ dynorphin များလွှတ်ပေးရန်အရှိန်နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုတိရိစ္ဆာန်အတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ prodynorphin ဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးပွနျလညျထူထောငျကတညျးက , ကျနော်တို့ 100 Hz EA ၏ဦးနှောက်အတွက်ΔFosB၏ function ကိုပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါတင်ပြသည်။
Tမိမိအလေ့လာမှုΔFosBကူးယူအချက်များဟာ prefrontal cortex ထဲမှာ, striatal ဒေသနှင့် posterior VTA အလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှု၏ 100 Hz ကို EA-သွေးဆောင်လျှော့ချရေးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါပြသ။ ဒါဟာအီသနောစားသုံးမှုကို EA-သွေးဆောင်လျှော့ချရေးသိမြင်မှု, စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်မော်တာအာရုံကြောဆားကစ်အပါအဝင်အရက်သောက်အီသနောကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းကွဲပြားခြားနားလမ်းကြောင်း, ပါဝင်စေမည်အကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ အဆိုပါ NAc core ကို conditional လှုံ့ဆော်မှု-supported မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ ။ အလားတူပင် dorsal striatum မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ compulsive သို့မဟုတ်အလေ့အထကဲ့သို့သဘာဝအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ ။ dorsal striatum ၏ (DLS) နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် medial (DMS) စိတျအပိုငျးကွဲပြားခန္ဓာဗေဒသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များနှင့်ထို့ကြောင့်မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိ ။ ဥပမာအားဖြင့်များအတွက် DLS အတွက် endogenous ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်ဒါပေမယ့် DMS အတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ထားမဟုတ် ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, ငါတို့နာတာရှည်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် NAc core နဲ့ပု DLS အတွက်, ဒါပေမယ့်မ NAc shell ကိုနှင့် DMS အတွက်ΔFosB၏အသံထွက်စုဆောင်းခြင်းသွေးဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာကကျနော်တို့နောက်ထပ် 100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများသိသိသာသာ NAc core နဲ့အလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ DLS အတွက် FosB / ΔFosBမှာ IR ၏စုဆောင်းခြင်း attenuated နှင့်, ကို attenuation NAc core ကိုထက် DLS ပိုမိုသိသာခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Tသူ PFC အလုပ်အမှုဆောင် function ကို, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အဆိုပါ PFC ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းတုံ့ပြန်မှုစတင်များနှင့်တုန့်ပြန်တားစီး mediates သော IL လမ်းညွှန်သော PRL ပါဝင်သည်; နှစ်ဦးစလုံးဒေသများလုပ်ရပ်များနှင့်ရလဒ်ကိုလမ်းပြ။ အဆိုပါ PRL နှင့် IL နှစ်ဦးစလုံးအေးစက်မူးယစ်ဆေး၌ရှိသကဲ့သို့ On-ချွတ်ယန္တရားများအစေခံခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုကွောကျရှံ့လိမ့်မည်။ ထို့အပွငျ OFC ၏မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူနှင့် Impulse ထိန်းညှိ်ပတ်သက်နေတဲ့ key ကိုဦးနှောက်ဒေသဖြစ်ပါသည် ။ အဆိုပါ PFC အတွက်ΔFosB၏စုဆောင်းခြင်းကိုတိုက်ရိုက် PFC အတွက်၎င်း၏လုပ်ရပ်များကနေတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သိမြင်မှုနှောင့်အယှက်သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ်ထုတ်လုပ်အားဖြင့်စွဲလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်နေသည် .
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းΔFosB၏ overexpression နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့ Impulse, ပိုကောင်းစေပါတယ် , . Iအဆိုပါ OFC လုပ်ကွက်များတွင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ဤသော့ချက်ဆိုးကျိုးများ - mportantly, ΔJunD၏မျိုးဗီဇသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ် overexpression ΔFosBနှင့်အခြား AP1-mediated မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု antagonizes ကြောင်း JunD ၏ကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant -a ။ လက်ရှိလေ့လာမှုအလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှု 100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးသော PRL နှင့် OFC အတွက်ΔFosB၏မြင့်မား, သွေးဆောင်ကြောင်းပြသ; အဆိုပါ IL အတွက် FosB / ΔFosBမှာ IR အလွန်အကျွံအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရသော်လည်းထို့ပြင်, က 100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများလျှော့ချခဲ့သည်။
အဆိုပါ VTA, mesolimbic dopamine စနစ်၏မူလအစ, အီသနောတို့အပါအဝင်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေဘို့အရေးကြီးသည်။ ယခင်က Perrotti နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အများအပြား psychostimulant မှစူးရှသို့မဟုတ်နာတာရှည်ထိတွေ့အောက်ပါတို့သည် posterior / အမြီး VTA အတွက် FosB / ΔFosB၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားပေးပါပြီ။ အရေးကြီးသည့်စကားရပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆိုပါ DA အာရုံခံမရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. စကားရပ်နှင့်တကွ, GABAergic အာရုံခံအတွက်တင်ပြထားပါသည် , ။ Perrotti ၏တွေ့ရှိချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုအပြီးတွင် VTA ၏နောက်ခံ / အမြီးတွင် FosB / osFosB ၏ဖော်ပြချက်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ Perrotti ၏တွေ့ရှိချက်အပေါ် အခြေခံ၍ လက်ရှိလေ့လာမှုတွင် FosB / wasFosB ဖော်ပြသောဆဲလ်အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုသော်လည်း၊ FosB / osFosB ကို GABAergic အာရုံခံများတွင်ဖော်ပြနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းကိုသာ posterior VTA ၏ GABA အာရုံခံ၏ subset ကိုအတွက် osFosB သော induction ၏ယန္တရားနေဆဲမသိရသေးပေ။ တစ် ဦး dopamine လွှာမှ inhibitor ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် VTA အတွက် FosB / osFosB သွေးဆောင်ကြောင်းပေးထားသည် ဒါကြောင့် dopamine system ကိုΔFosBသော induction mediates ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာခြောက်ရက်ကြာ 100 Hz ကို EA သိသိသာသာ posterior / အမြီး VTA အတွက် FosB / ΔFosBမှာ IR လျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါ VTA အတွက် KORs ၏ activation DA အာရုံခံ hyperpolarize နှင့်ဖြန့်ချိ site ကိုမှာတိုက်ရိုက်လုပ်ရပ်များအားဖြင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖိနှိပ်နိုင်သောပေးထား ကျနော်တို့ KORs ၏ activation အသုံးပြုပုံ 100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများအတွက် VTA ဂါဘမြို့သားအာရုံခံအတွက် FosB / ΔFosBစကားရပ်၏တားစီးဖို့ဦးဆောင်သည့် dopamine လွှတ်ပေးရန်, ဖိနှိပ်အံ့သောငှါအဆိုပြု , ပေမယ့်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံဆဲလျတားစီး၏အကျိုးဆက်ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများ KORs function ဟာ PFC- အပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် amygdala- ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြပေမယ် VTA အတွက် NAc-ထုတ်လုပ်တဲ့မဟုတ် DA အာရုံခံပါပြီ , ; ထို့ကြောင့်ဤ 100 Hz ကို EA ၏မျိုးစုံအစည်းအဝေးများအားဖြင့်သွေးဆောင်အရက်စားသုံးမှု၏တားစီးမှု VTA-PFC သို့မဟုတ် VTA-amygdala DA ဆားကစ်ဒါမှမဟုတ် VTA အတွက် KORs ၏ရွေးချယ် activation ကနေတဆင့်နှစ်ဦးစလုံး၏ရွေးချယ်တားစီးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီလေ့လာမှု acupoint ST100 မှာမြင့်မားတဲ့ကြိမ်နှုန်းမှာ EA ၏မျိုးစုံကိုအစည်းအဝေးများ (36 Hz) (1) အီသနောစားသုံးမှုနှင့် preference ကိုနာတာရှည်အီသနောမြင့်မားသောပမာဏကိုလောင်ကြောင်းကြွက်၌၎င်း, (2) FosB / ΔFosBမှာ IR လျှော့ချအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းပြသ ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်။ အဆိုပါΔFosBနှင့် FosB မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်အာရုံကြော plasticity ်ပတ်သက်နေကူးယူအချက်များ၏ Fos မိသားစု၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုပေးထားသောကြောင့်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBနှင့် FosB အလွန်အကျွံအရက်သောက်သုံးလျှော့ချအတွက် EA ၏လုပ်ဆောင်ချက်သော့ချက်ကစားသမားဖြစ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက် [ထောက်ပံ့ရေးအပေါ်အမျိုးသား Institute မှ - ဤအလုပ်ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံခဲ့သည် AA016964 နှင့် AA016618] ။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
1. et al Anton RF, O'Malley SS, Ciraulo DA, Cisler RA, Couper D ။ ပေါင်းစပ်ဆေးဝါးနှင့်ကုထုံးနှင့်အရက်မှီခိုမှုအတွက်အမူအကျင့်ကြားဝင်: ပေါင်းစပ်လေ့လာမှု: တစ်ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2006;295: 2003-2017 ။ [PubMed]
2. မန်း K ကို Lehert P ကို, မော်ဂန် MY ။ အရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် abstinence များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် acamprosate များ၏ထိရောက်မှု: တစ် Meta-analysis သည်၏ရလဒ်များကို။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004;28: 51-63 ။ [PubMed]
3. Meyer RJ, Smith က je, ကြိမ်ဒဏ် DN ။ ကွန်မြူနတီစစ်ကူချဉ်းကပ်။ မကြာမီက Dev မှအရက်။ 2003;16: 183-195 ။ [PubMed]
4. lu GW ။ zusanli အပ်စိုက်ကုထုံးအချက်များအပေါ် afferent ဖိုင်ဘာ innervation ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1983;245: R606-612 ။ [PubMed]
5. Stux G. အအပ်စိုက်ကုထုံးစာသားကိုစာအုပ်နှင့် Atlas ။ ဘာလင်: Springer-Verlag ။ 1987 ။
6. Jindal V ကို, Ge တစ်ဦးက, Mansky PJ ။ ကလေးများအတွက်အပ်စိုက်ကုထုံး၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ထိရောက်မှု: အသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကိုကလေးအထူးကု Hematol Oncol ။ 2008;30: 431-442 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7. Translational Medicine တစ်ဦးအမှု: opiate စွဲ၏ကုသမှုများအတွက်ဟန်ဂျေ, Cui ကို C, Wu အယ်လ်အပ်စိုက်ကုထုံး-related နည်းစနစ်။ တပ်ဦး Med ။ 2011;5: 141-150 ။ [PubMed]
8. Yoshimoto K ကို Kato B, Sakai ကငွေကျပ်, Shibata M က, Yano, et al ။ Electroacupuncture ဆွကန့်သတ်ကြွက်များတွင်အရက်-အရက်သောက်အပြုအမူအတွက်တိုးလာဖိနှိပ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2001;25: 63S-68S ။ [PubMed]
9. လှိုဏ် M က, Passie T က, Friedrich S က, Wiese B, Schneider U. အပ်စိုက်ကုထုံးအရက်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကုသမှုအတွက်: တစ်ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled အတွင်းလူနာလေ့လာမှု။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2002;7: 415-419 ။ [PubMed]
10 ။ ကင်မ် YH, Schiff အီး, Waalen J ကို, ကိုကင်းစွဲကုသမှုအတွက်အပ်စိုက်ကုထုံး၏ Hovell အမ်ထိရောက်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ။ J ကိုစွဲ dis ။ 2005;24: 115-132 ။ [PubMed]
11 ။ Kunz S က, Schulz က M, Lewitzky M က, Driessen M က, ရနံ့ကုထုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရက်ရုပ်သိမ်းရေးအဘို့အ Rau အိပ်ချ်နားအပ်စိုက်ကုထုံး: တစ်ကျပန်း-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31: 436-442 ။ [PubMed]
12 ။ Overstreet DH, Cui CL, Ma YY, Guo CY, ဟန် JS, et al ။ Electroacupuncture တစ်ခု opiate-အထိခိုက်မခံယန္တရားကနေတဆင့်အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ Neurochem Res ။ 2008;33: 2166-2170 ။ [PubMed]
13 ။ ယန် CH, Lee က BB, Jung HS, ရှိန်းပြား, ငါနိုမူဟွန်းမှ PU, et al ။ ရွေ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်အပေါ် electroacupuncture ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002;72: 847-855 ။ [PubMed]
14 ။ Li က J ကို, Zou Y ကိုရဲ JH ။ အနိမျ့အကြိမ်ရေ electroacupuncture ရွေးချယ်ကြွက်များတွင်ဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2011;86: 428-434 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Robison AJ, Nestler EJ ။ မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011;12: 623-637 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ et al Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008;62: 358-369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Bibb ဂျာ Chen က J ကို, တေလာ JR, Svenningsson P ကို, Nishi တစ်ဦးက, et al ။ ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝ။ 2001;410: 376-380 ။ [PubMed]
18 ။ Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, et al ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9: 205-211 ။ [PubMed]
19 ။ Li က J ကို, Cheng Y ကို, Bian WL, လျူက X, Zhang ကနေ C, et al ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက် intkae အားဖြင့် FosB / deltaFosB ၏ဒေသကြီး-တိကျတဲ့သော induction: naltrexone ၏ဆိုးကျိုးများ။ အရက် Clin Exp Res 34 ။ 2010 ။
20 ။ Cui CL, Wu LZ, မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကုသမှုများအတွက် Luo အဘိဓါန်အက်ဖ်အပ်စိုက်ကုထုံး။ Neurochem Res ။ 2008;33: 2013-2022 ။ [PubMed]
21 ။ ယန် CH, Yoon အက်စ်အက်စ်, Hansen DM, Wilcox JD, Blumell BR, et al ။ အပ်စိုက်ကုထုံးဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၌ဂါဘမြို့သားအာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2010;34: 2137-2146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ et al Yoon အက်စ်အက်စ်ယန် EJ, Lee က BH, ဂျန် EY ကင်မ် hy ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အပေါ်အပ်စိုက်ကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology ။ 2012 ။ (Berl) ။
23 ။ et al Perrotti LI, Bolanos, CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards က S နဲ့။ DeltaFosB psychostimulant ကုသမှုပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ posterior အမြီးအတွက် GABAergic ဆဲလ်လူဦးရေအတွက်စုဆောင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2005;21: 2817-2824 ။ [PubMed]
24 ။ Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Steensland P ကို, မက်ဒီနာ B, Abernathy Ke, Chandler LJ, et al ။ 20% အီသနောမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို Long-အီဗန်နှင့် Wistar ကြွက်များတွင်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32: 1816-1823 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ Li က J ကို, Bian W က, Dave V ကိုရဲ JH ။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွင်းဂါဘမြို့သား (က) receptors ၏ပိတ်ဆို့ဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု attenuates နှင့် hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်။ စှဲလမျးသူ။ 2011;Biol(16): 600-614 ။
26 ။ Li က J ကို, Nie H ကို, Bian W က, Dave V ကို, Janak PH သည်, et al ။ အဆိုပါ Ventral Tegmental ဧရိယာသို့ Glycine ၏ Microinjection selection အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ J ကို Pharmacol Exp ။ 2012;Ther(341): 196-204 ။
27 ။ Poklis တစ်ဦးက, Mackell MA ။ သွေးထဲမှာအီသနောဒပြဌာန်းခွင့်များအတွက်ပြုပြင်ထားသောအရက် dehydrogenase assay ၏အကဲဖြတ်။ Clin Chem ။ 1982;28: 2125-2127 ။ [PubMed]
28 ။ Nielsen CK, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Pierson HB, Li က R ကို, Saini SK ကို, et al ။ တစ်ဦးကဝတ္ထုမြစ်ဝကျွန်းပေါ် opioid အဲဒီ receptor ရန်, SoRI-9409, မိုးသည်းထန်စွာ-သောက်သုံးကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ကျဆင်းခြင်းထုတ်လုပ်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;64: 974-981 ။ [PubMed]
29 ။ Zhao နှင့် RJ, Yoon အက်စ်အက်စ်, Lee က BH, Kwon YK ကင်မ် KJ, et al ။ အပ်စိုက်ကုထုံးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းနှင့်နာတာရှည်အီသနော-ကုသကြွက်များတွင်အီသနောစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် accumbal dopamine များလွှတ်ပေးရန်ပုံမှန်။ neuroscience လက်တ။ 2006;395: 28-32 ။ [PubMed]
30 ။ Paxinos, G, stereotaxic သြဒီနိတ် 6th ထုတ်ဝေ, ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းများတွင် Watson ဟာ C. အဆိုပါ Rat ဦးနှောက်။ 2007 ။
31 ။ ဝမ် GB ကို, Wu LZ, et al ယု P ကိုလီ YJ, Ping XJ ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါများ၏ဖိနှိပ်မှုအပေါ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်အကွိမျမြားစှာ 100 Hz electroacupuncture ကုသ: ဗဟို preprodynorphin mRNA နှင့်ကို p-CREB ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ Peptides ။ 2011;32: 713-721 ။ [PubMed]
32 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1445-1449 ။ [PubMed]
33 ။ ချန်, G, et al Cuzon Carlson VC ကို, ဝမ် J ကို, Beck တစ်ဦးက, Heinz တစ်ဦး။ လူ့အရက်နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုများနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် Striatal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2011;35: 1739-1748 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Kaufling J ကို, Veinante P ကို, Pawlowski လုပ် SA, Freund-Mercier MJ, Barrot အမ် Afferents ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ GABAergic အမြီးရန်။ J ကို comp Neurol ။ 2009;513: 597-621 ။ [PubMed]
35 ။ ရှီ XD, ဝမ် GB ကို, Ma YY, Ren W က, Luo အဘိဓါန်က F, et al ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအရံလျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေးမော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်ကြွက်များတွင်ငွိမျးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ reinstatement နှစ်ဦးစလုံးဖိနှိပ်: NAc အတွက် PPE နှင့် PPD mRNA ၏အရှိန်စကားရပ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004;130: 124-133 ။ [PubMed]
36 ။ ဝူ LZ, Cui CL, Tian JB, ဂျီ D ကို, ဟန် JS ။ ကြွက်များတွင် electroacupuncture ခြင်းဖြင့်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဖိနှိပ်မှု: dynorphin နှင့် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;851: 290-296 ။ [PubMed]
37 ။ Wee က S, Koob gf ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် dynorphin-Kappa opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 2010;210: 121-135 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Fadda P ကို, Tronci S က, ကိုလံဘို, G, အရက်- သာ. နှစ်သက်ခြင်းနှင့်အရက်-nonpreferring ကြွက်၏ရှေးခယျြထားဦးနှောက်ဒေသများအတွက် opioid စနစ် Fratta ဒဗလျူကွာခြားချက်များ။ အရက် Clin Exp Res ။ 1999;23: 1296-1305 ။ [PubMed]
39 ။ Marinelli PW, Kiianmaa K ကို AA ကိုနှင့် ANA ကကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက် Gianoulakis C. Opioid propeptide mRNA အကြောင်းအရာနှင့်အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2000;66: 1915-1927 ။ [PubMed]
40 ။ Winkler တစ်ဦးကနှစ်ခု inbred ကြွက်ဗီဇ၏ကွဲပြားဦးနှောက်ဒေသများအတွက် Kappa opioid အဲဒီ receptor mRNA အကြောင်းအရာအတွက် Spanagel R. ကွာခြားချက်များ။ Neuroreport ။ 1998;9: 1459-1464 ။ [PubMed]
41 ။ Lindholm S က, Werme M က, Brene S က, Franck ဂျေကြွက်များတွင်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု attenuates U50,488H အဆိုပါရွေးချယ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2001;120: 137-146 ။ [PubMed]
42 ။ Mitchell က JM, Liang MT, Fields HL ။ အဆိုပါ Kappa opioid ရန် norbinaltorphimine ၏တစ်ခုတည်းသောဆေးထိုးကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုတိုးပွားစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2005;182: 384-392 ။ [PubMed]
43 ။ Xuei X ကို, Dick: D, et al Flury-Wetherill L ကို, Tian HJ, Agrawal တစ်ဦး။ အရက်မှီခိုအတူ Kappa-opioid စနစ်၏အသင်းမှ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;11: 1016-1024 ။ [PubMed]
44 ။ ဟန် JS ။ အပ်စိုက်ကုထုံး: ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်း၏လျှပ်စစ်ဆွကထုတ်လုပ် neuropeptide လွှတ်ပေးရန်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2003;26: 17-22 ။ [PubMed]
45 ။ Logrip ML, Janak PH သည်, Ron ဃ Dynorphin အီသနောစားသုံးမှု၏ striatal BDNF စည်းမျဉ်းတစ်မြစ်အောက်ပိုင်း effector ဖြစ်ပါတယ်။ FASEB ဂျေ 2008;22: 2393-2404 ။ [PubMed]
46 ။ Logrip ML, Janak PH သည်, ထို Kappa opioid အဲဒီ receptor agonist U50,488H အားဖြင့်အီသနောဆုလာဘ်များတွင် Ron ဃပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ အရက်။ 2009;43: 359-365 ။ [PubMed]
47 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1481-1489 ။ [PubMed]
48 ။ Vanderschuren LJ, Di Ciano P ကို, Everitt BJ ။ cue-controlled ကင်းရှာထဲမှာ dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2005;25: 8665-8670 ။ [PubMed]
49 ။ Voorn P ကို, Vanderschuren LJ, Groenewegen HJ, Robbins TW, Pennartz CM ။ အဆိုပါ striatum ရဲ့ dorsal-ventral သွေးခွဲပေါ်မှာလှည့်ဖျားချပြီး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2004;27: 468-474 ။ [PubMed]
50 ။ Jeanblanc J ကို, သူ Dy, Carnicella S က, Kharazia V ကို, Janak PH သည်, et al ။ အဆိုပါ dorsolateral striatum တံခါးတို့အရက်သောက်သုံးအတွက် Endogenous BDNF ။ J ကို neuroscience ။ 2009;29: 13494-13502 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ Krawczyk DC က။ လူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အာရုံကြောအခြေခံဖို့ prefrontal cortex ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2002;26: 631-664 ။ [PubMed]
52 ။ Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Winstanley, CA, LaPlant မေး, Theobald DE, အစိမ်းရောင်က TA, Bachtell RK, et al ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကင်း-သွေးဆောင်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသည်းခံစိတ် mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 10497-10507 ။ [PubMed]
54 ။ Winstanley, CA, အစိမ်းရောင်က TA, Theobald DE, Renthal W က, LaPlant မေး, et al ။ orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကိုကင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု attenuating ရှိနေသော်လည်း locomotor ာင်း potentiates ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93: 278-284 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ Kaufling J ကို, Waltisperger အီး, et al Bourdy R ကို, Valera တစ်ဦးက, Veinante P ကို။ စူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏ GABAergic အမြီး၏ Pharmacological စုဆောင်းမှု။ br J ကို Pharmacol ။ 2010;161: 1677-1691 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56 ။ Ford ကားက CP, Beckstead MJ, Williams က JT ။ somatodendritic dopamine inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း၏ Kappa opioid တားစီး။ J ကို Neurophysiol ။ 2007;97: 883-891 ။ [PubMed]
57 ။ Margolis eb, Lock ကို H ကို, Chefer VI ကို, Shippenberg TS, Hjelmstad GO, et al ။ Kappa opioids ရွေးချယ်သည့် prefrontal cortex မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံထိန်းချုပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006;103: 2938-2942 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
58 ။ Margolis eb, Mitchell က JM, Ishikawa J ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ: အနာဂတ်ပစ်မှတ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တားစီးဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2008;28: 8908-8913 ။ [PubMed]